Goorma ayaad isku diiwaangelin kartaa qorshaha caafimaadka laba geesoodka ah haddii aad haysato Medicaid iyo Medicare? | UnitedHealthcare Community Plan: Medicare & Medicaid Health Plans
Taariikhda Ugu Dambaysay ee La Cusbooneysiiyay: Context link Nofeembar 17, 2020
Sidaas darteed, markaad ogaato inaad u-qalanto qorshaha caafimaadka ee laba geesoodka ah, maxaa xiga? Goorma ayaad isdiiwaangelin kartaa? Jawaabtu waxay ku xiran tahay xaaladaada gaarka ah. Hoos waxaa ku yaala waxa aad u baahan tahay inaad ogaato si aad u awooddo inaad u sheegto goorta aad isdiiwaangelin karto ama beddelan karto qorshaha caafimaadka ee laba geesoodka ah.
Ma ahan inaad sugto. Context link
Muddada Diiwaangelinta Sannadlaha ah ee Medicare (AEP) waxay dhacdaa sanadkii hal mar gudaha xilliga dayrta. Taasi waa marka qof kasta oo u-qalma Medicare ay beddeli karaan qorshahooda caafimaadka Laakiin haddii aad u-qalanto Qorshaha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah DSNP, ma ahan inaad sugto. Waxaa laga yaabaa inaad isla markiiba isdiiwaangeliso.
Waxaa laga yaabaa inaad u-qalanto inaad isdiiwaangeliso maanta haddii aad:
Tahay 65 oo si cusub ugu qalanto Medicare ama qabto naafonimo loogu qalmi karo.
Hawlgab noqonayso oo aad luminayso caymiskaaga jira.
Ka guurtay aagga adeegga qorshahaaga Medicare ee jira.
Qabto xaalad dabadheeraatay sida sonkorow ama wadna xanuun joogto ah.
Hel macaashyada Medicaid.
Maxaa dhacaya haddii aad horay u haysatay Medicare iyo Medicaid labaduba?
Waxaad isku diiwaangelin kartaa ama beddeli kartaa laba qorshe hal mar Muddada Diiwaangelinta Gaarka ah (SEP) ama inta lagu gudajiro Muddada Diiwaangelinta Sannadlaha ah ee Medicare (AEP). Kadib marka aad isku diiwaangeliso qorshaha caafimaadka ee laba geesoodka ah uma baahnid inaad dib u cusboonaysiiso. Ilaa iyo inta aad u-qalmato, qorshaha caafimaadkaaga ee laba geesoodka ah ayaa si toos ah loo cusboonaysiin doonaa sannad kasta. Balse waxaad u baahan tahay inaad dib u caddayso Medicaid sanad walba si aad ugu qalanto qorshaha caafimaadka ee laba geesoodka ah.
Goorma ayuu caymiskaagu bilaabmayaa?
Taasi waxay ku xiran tahay markaad iska diiwaangeliso qorshaha caafimaadka oo laba geesoodka ah.
Haddii Aad Isdiiwaangeliso: Caymiskaaga Ayaa Bilaabanaya:
Marka ugu horraysa ee aad u-qalanto Maalinta ugu horraysa ee bisha aad u-qalanto Medicare
Inta lagu jiro Muddada Diiwaangelinta Gaarka ah (SEP) Maalinta ugu horraysa ee bisha soo socota
Inta lagu jiro Diiwaangelinta Sannadlaha ah (AEP) Maalinta ugu horraysa ee sannadka soo socda
Fiiro gaar ah: Haddii SEP-gaagu dhaco inta lagu gudajiro AEP, caymiskaagu wuxuu bilaaban doonaa maalinta ugu horraysa ee bisha xigta.
Isku diiwaangeli sida ugu dhakhsaha badan ee aad awooddo. Context link
Marka aad sida ugu dhakhsaha badan ee aad awooddo isku diiwaangeliso, waxaad si dhakhso ah ugu raaxaysan kartaa dhammaan macaashyada siyaadada ah ee la socda qorshaha caafimaadka ee laba geesoodka ah.
Taariikhaha muhiimka ah si aad isugu diyaariso Muddada Diiwaangelinta Sannadlaha ah ee Medicare:
Taariikhda Muhiimka ah Sharaxaada
Oktoobar 1 Bilow inaad raadiso qorshaha caafimaadka ee laba geesoodka ah ee laga heli karo halka aad ku nooshahay.
Oktoobar 15 Maalinta koowaad ee AEP, marka aad iska diiwaangelin karto ama aad beddeli karto qorshaha caafimaadka ee laba geesoodka ah ee sanadka soo socda.
Diseembar 7 Maalinta ugu dambeysa ee aad iska diiwaangelin karto qorshaha kahor inta uusan AEP dhammaanin.
Janaayo 1 Maalinta qorshahaaga cusub uu bilaabanayo haddii aad isdiiwaangeliso inta lagu gudajiro AEP.
Cusbooneysintii Ugu Dambeysay: 04.18.2022 waqtiga 02:53 GALABNIMO CDT